कब्जियत धेरैले भोगिरहेको समस्या हो हटाउन, यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् – Khabar Patrika Np
कब्जियत धेरैले भोगिरहेको समस्या हो हटाउन, यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ११, २०७७ समय: २३:०८:३५
धेरैले भोगिरहेको स’मस्या हो, क’ब्जियत । कतिपय अवस्थामा यो क्ष’णिक पनि हुनसक्छ। तर, खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन गरिएन भने क’ब्जियतले गंभिर स’मस्या निम्त्याउन सक्छ ।
क’ब्जियत के हो ? क’ब्जियत एक यस्तो स्थिती हो, जो पे’ट ठीक ढंगले सफा हुन पाउँदैन। साथै मल त्याग गरेको स’मयमा कष्ट हुन्छ । क’ब्जियत पीडित आम व्यक्तिको तुलनामा कम पटक शौच गर्छन् । सामन्य व्यक्तिले दिनहुँ मल त्याग गर्छन्।
तर, जसलाई क’ब्जियत छ, उनीहरु दुईरतीन दिनसम्म पनि शौच गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । यहि कारण उनीहरुको पे’ट भारी हुन्छ, शरीर चंगा र छरितो महशुस हुँदैन । खानामा अरुची हुन्छ। क’ब्जियतको कारण कतिको वान्ता र टाउको दुख्ने स’मस्या हुन्छ।
लक्षण के हो ? – ठीक ढंगले पे’ट सफा नहुनु, मल त्याग नहुनु । – मल त्याग गर्नमा स’मस्या हुनु । – दिसा धेरै कडा हुनु र कम मात्रामा हुनु । – पे’टमा दुखाई अनुभव हुनु । – वान्ता हुनु ।
किन हुन्छ क’ब्जियत ? – खाने तालिका नियमित नहुनु । – बा’सी खानेकुरा सेवन । – शारीरिक रुपमा निस्किय हुनु वा लामो स’मयसम्म विश्राम लिने बानी । – मानसिक तनाव । – अति चिल्लोचाप्लो एवं अपाच्य भोजन। – पे’टको कमजोरी – पानी कम पिउनु । – खाना खाएको स’मय धेरै पानी पिउनु । – गरम मसलायुक्त एवं मसलेदार खानेकुरा खानु ।
के छ त उ’पचार ? क’ब्जियत खराब दिनचर्या र खानपानको कारण हुने गर्छ । त्यसैले सक्रिय जीवन विताउनुपर्छ । शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार स्व’स्थ्य र सुपाच्य भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ । फाइबरयुक्त सब्जी, फलफूल र सलादको सेवनमा जोड दिनुपर्छ । यससँगै व्यायाम पनि आवश्यक हुन्छ। दिसा-पिसाबलाई लामो समय रोकेर राख्न हुँदैन ।
आर्युबेदिक उ’पचार विधी: – त्रिफला चुर्ण दुई चम्चा हल्का तातो पानीमा घोले नियमित रुपले राती सुत्नुअघि सेवन गर्नुपर्छ । – मनतातो दुध वा पानीमा हर्रा-बर्रा र अमलाको समान मात्रामा तयार गरिएको चूर्ण राती सुत्नुअघि सेवन गर्नुपर्छ । – क’ब्जियतको उपचारमा किसमिस एकदमै उपयोगी मानिन्छ ।
आठ वटा जति किसमिस तातो दुधमा उमालेर नियमित सेवन गर्नुपर्छ । – पेटको रो’गमा एकदमै उपयोगी हुन्छ, मेवा । – स्याउ र अंगुरको सेवनबाट पनि क’ब्जियतको स’मस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ। – अमलाको चूर्णले क’ब्जियतको स’मस्याबाट मुक्ती दिन्छ। – गोलभेडा सेवन गर्दा क’ब्जियत ठीक हुन्छ। – तामाको भाँडामा राखिएको पानीमा थोरै नुन हाल्ने र विहान खाली पेटमा पिउने गर्नुपर्छ ।